Archive du 20170908
Lalao Ravalomanana Asa fa tsy kabary
Vita hatreo ny resabe fa raha izay no nampandroso efa lasa paradisa Antananarivo.
Riana Andriamandavy VII Antomotra ny fisamborana azy
Miverina ambony tabilao indray ny resaka Riana Andriamandavy VII tato ho ato, rehefa nangina tao anatin’ny fotoana ela.
Kmf/Cnoe Mitaky ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 2018
Manahy ny fizotran’ny fanomanana ny fifidianana hotanterahana amin’ny taona ho avy ny Kmf/Cnoe (Komitim-pirenena Mpanaramaso ny Fifidianana).
Antenimierandoholona – Minisiteran’ny fitsarana Hiara-kiasa amin’ny fampiharana ny lalàna
Tonga nitsidika tamim-pomba fifanajana ny filohan’ny Antenimierandoholona sady mpampianatra lalàna Rakotomanana Honoré tetsy amin’ny lapan’Anosikely, omaly, ny minisitry ny fitsarana Rasolo Elise Alexandrine.
Latsaka an-katerena ny firenena Manaitra ny hambom-pon’ny Loholona ny FMDD
Aminay amin’ny maha tia tanindrazana, aleo tonga dia tenenina hoe : mahamenatra ihany ny hitsangana amin’izao fotoana izao amin’ny maha mpanao politika ny tena satria ilay fanaovana politika eto amin’ny firenena, dia lasa resaka fifankahalana, fiandrasana kendry tohana,…
Avela hankalaza ve ?
Miarahaba Jean a ! Elaela tsy hita sy re mihitsy ianao an ! Ohatry ny nipiripirina daholo koa moa tato ho ato ireo lazaina ho mpitrifana.
Lakan-drendrika tao Maroantsetra Olona 4 no mbola karohina
Araka ny fampitam-baovaon’ny lehiben’ny faritra Analanjirofo, Ramaroson Jacques, tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina omaly dia eo am-pikarohana hatrany ireo olona miisa 4 tsy hita popoka vokatry ny faharendrehana lakana iray tao Maroantsetra amin’izao fotoana ireo tompon’andraikitra amin’izany.
Sosialy Olona sahirana an-jatony notolorana fanampiana
Marihina isan-taona isaky ny 5 septambra ny andro manerantany ho an’ny asa fiantrana.
Antananarivo Renivohitra Miroso amin’ny fanatsarana ny tanàna
Nitondra fanamarihana ny CUA manoloana ny resabe voizina an-gazety sy amin’ny haino aman-jery sasany fa namidin’ny kaominina Antananarivo amin’ny vahiny ny tany na ny “Esplanade” etsy Analakely.
Fenoarivo Atsimondrano Misy depiote mibodo tanin’olona
Velaran-tany mirefy 800 m2 no voalaza fa bodoina depiote iray hametrahany ny fiarany.
Mahajanga Razana nitsingevana teny amin'ny “Bord”
Hita omaly tamin’ny fiandohan’ny tolakandro teny amin'ny “Bord de la mer” nanoloana ny biraon’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy
Fiahiana ara-tsosialy Hitsinjo ny tantsaha ny CNaPS
Notokanana omaly alakamisy 07 septambra ny trano fiasana sy trano fonenan’ny CNaPS any Ambilobe Faritra DIANA.
Marathon international de Tana Miantso fanohanana ny atleta malagasy
Hiditra amin’ny andiany faha-17 ilay hetsika ara-panatanjahantena Marathon international de Tana izay hotontosaina ny 14 sy 15 oktobra ho avy izao.
Kitra THB Champion’s Legue Miditra amin’ny andro faha-4 ny fifaninanana
Miditra amin’ny andro faha-4 ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2017 eo amin’ny taranja baolina kitra dingana voalohany anio zoma 8 septambra 2017 ka any Mahajanga :
Rugby Analamanga Mitohy ao anaty disadisa ireo lalao
Notaterina teto omaly fa mbola ao anatin’ny disadisa tanteraka indray ankehitriny ny taranja rugby eto Analamanga.
Tae kwon do-“Combat retour” Nisongadina ireo klioba efa zatr’ady
Notanterahana tamin’ny alahady 3 septambra teo, tao amin’ny tranompokonolona Sahambavy ny “Combat retour” ho an’ny haiady Tae kwon do WTF.
Tsy maintsy ho tratry ny aloka
Rehefa tiana hovonoina ny alika dia lazaina fa romotra, hoy ny fitenenana.
Ranomasimbe Indiana Manana ny toerany ny Malagasy
Malagasy no voatendry ho sekretera mpanatanteraky ny AVCOI na ny Fivondronan’ireo tanànan-dehibe sy kaominina aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indiana dia Razafindrazaka Lalaina.
Salon des l’Etudiant Tontosaina ao Antsirabe ny andiany faha-7
Anisan’ny fanampian’ny Radio Haja Antsirabe ny mpianatra ny hetsika “Salon de l’Etudiant”, izay fanaony isan-taona.
Taom-baovao Malagasy Efa ho 12 karazana
Vory lanona indray tetsy amin’ny Trass Tsiadana ny alin’ny alarobia teo niatrika ilay hetsika fanaon-dry zareo avy eo anivon’ny fikambanana Faribolana Fanilo na “Tafa hariva”. “
Vory lanona indray tetsy amin’ny Trass Tsiadana ny alin’ny alarobia teo niatrika ilay hetsika fanaon-dry zareo avy eo anivon’ny fikambanana Faribolana Fanilo na “Tafa hariva”.
Zandarimariam-pirenena Tsy natao fieren’ny jiolahy
Nitohy tany amin’ny faritr’i Betsiboka ny bemidina tanterahin’ny zandarimaria, ka tao Tsaratànana no notontosaina.